ဘေဘီလေးတွေကို နို့ဘူးတိုက်တာ ဘယ်အချိန်မှာ ရပ်သင့်သလဲ? - Chit MayMay
Home Child Nutrition ဘေဘီလေးတွေကို နို့ဘူးတိုက်တာ ဘယ်အချိန်မှာ ရပ်သင့်သလဲ?
ဘေဘီလေးတွေကို နို့ဘူးတိုက်တာ ဘယ်အချိန်မှာ ရပ်သင့်သလဲ?
၁၂လ-၁၄လအရွယ်ကနေ နို့ဘူးဖြတ်ပြီး ဖြည့်စွက်စာ စကျွေးနိုင်ပါတယ်။ ၁နှစ်ပြည့်ပြီးဝန်းကျင်လောက်မှာ ကလေးငယ်ကို နို့ဘူးတိုက်တာ ရပ်ပြီးသူတို့ကို ခွက်သေးသေးလေးကနေ နို့သောက်တာ အဆင်ပြေမပြေ စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအကူးအပြောင်းက ခွက်နဲ့စသောက်တတ်တဲ့ ဘေဘီလေးတစ်ချို့အတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီး သဘာဝကျသော်လည်း တစ်ချို့မိဘတွေဟာ နို့ဘူးအကျင့်ကို ဖြတ်ဖို့ အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးငယ်ကို နို့ဘူးတိုက်ကျွေးခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို သိအောင် ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဘေဘီလေးကို နို့ဘူးစို့တာ ရပ်ဖို့နည်းလမ်း
၁။ ခွက်တစ်ခုနဲ့ ပြောင်းတိုက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုသိပါ
ဘေဘီလေးတွေ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ခွက်ကို ကိုင်ပြီးသောက်ဖို့အတွက် fine motor skills ဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က သဘာဝအရ စပ်စုကြမှာဖြစ်ပြီး အသစ်သောအရာတွေကို ကြိုးစားကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ ကူးပြောင်းမှုကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပါ
နို့ဘူးကို စွန့်လွှတ်ရခြင်းက မေမေတို့ ကလေးငယ်အတွက် စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းပြုလုပ်ပါ။ အစပိုင်းမှာ နို့ဘူးတိုက်တဲ့ အစီအစဉ်ကို ခွက်နဲ့ထည့်တိုက်ခြင်းဖြင့် အစားထိုးပါ။
၃။ နို့တိုက်ချိန်ကို လျှော့ချပါ
နို့ဘူးကိုတွယ်တာခြင်းက ကလေးငယ်တွေအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခုထက် အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ဖြည့်စွက်စာတွေကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် နို့ဘူးတိုက်ကျွေးချိန်ကို လျှော့ချပါ။ ဖြည့်စွက်စာက ကလေးငယ်ကို အချိန်ကြာကြာ ဗိုက်ပြည့်နေစေသဖြင့် နို့ဘူးအသုံးပြုတာကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာ အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ နို့ဘူးစို့တာကို အများဆုံးတွယ်တာလေ့ရှိတာကြောင့် အစပိုင်းမှာတော့ အိပ်ရာဝင်ချိန်ကို မတိုက်လို့ မရသေးပါဘူး။
၄။ လက်ကိုင်နှစ်ခုခွက်လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပါ
လက်ကိုင်နှစ်ဖက်ပါတဲ့ ခွက်လေးတွေက မဖိတ်စင်နိုင်တဲ့အပြင် အသုံးပြုရလွယ်ပါတယ်၊ ထို့အပြင်ကလေးတွေအနေနဲ့ ခွက်လက်ကိုင်တွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။
၅။ ပုလင်းထဲမှာ နို့ကို ရေရောပါ
ဒီလှည့်ကွက်ဟောင်းက အသုံးဝင်နေဆဲပါ၊ ကလေးကို နို့ဘူးပေးတဲ့အခါ အရသာပျော့သွားအောင် ရေရောပြီးပေးပါ။ ခွက်နဲ့ပေးတဲ့အခါ နို့အပြည့်ပေးပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ နို့က ပုလင်းထဲမှာရှိတဲ့နို့ထက် အရသာပိုရှိတယ်ဆိုတာကို သူသိလာပါလိမ့်မယ်။
၆။ ကလေးအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ခွက်ဖြစ်ပါစေ
ကလေးလေးတွေဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွက်လေးတွေဆိုရင် သောက်ချင်ကြပါတယ်။ ကာလာစုံပါတဲ့ခွက်လေးတွေ၊ ပိုက်အလိမ်တပ်ထားးတဲ့ ခွက်လေးတွေက ကလေးရဲ့အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ပါတယ်။
၇။ အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ စောင် (သို့) သိုးမွေးအရုပ်လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပါ
အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ နို့ဘူးကို ဖယ်ရှားဖို့ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်မှာပါ။ နို့ကို ခွက်တစ်ခွက်နဲ့တိုက်ပြီးရင် ကလေးငယ်အား အိပ်ရာဝင်နိုင်အောင် စောင် (သို့) သိုးမွှေးရုပ်လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ သူတို့နို့စို့ခြင်းမှ ရရှိတဲ့ နှစ်သိမ့်မှုကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
အပြောင်းအလဲက နေ့ချင်းညချင်းတော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကလေးက သူလိုချင်တာမရလို့ ဂျီကျတဲ့အခါ သည်းခံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ရရင် ရက်အနည်းငယ်လောက်နားပြီးမှ တစ်ဖန်ပြန်စပါ။
Previous articleမိဘတစ်ဦးအနေနဲ့ ကလေးတွေစိတ်ငြိမ်အောင် ပြောဆိုပေးနိုင်သော စကားလုံးများ
မိဘတစ်ဦးအနေနဲ့ ကလေးတွေစိတ်ငြိမ်အောင် ပြောဆိုပေးနိုင်သော စကားလုံးများ
အသက် ၁၀နှစ်မှ ၁၂နှစ်အကြားက အရေးကြီးသော ပြောင်းလဲမှု (၅)ခု
သားသားမီးမီးလေးတို့ကို ရေချိုးပေးတဲ့အခါ သတိထားရမယ့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
Mom and Baby167
Nyein Thu - October 9, 2020 0